Atụmatụ Tatena Tattoos Echiche Ebumnobi Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Atụmatụ Tatena Tattoos Echiche Echiche Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị
Enweghị ikwu na tatala Mandala bụ otu n'ime ndị kasị mma n'ụwa. Ị na-ahụ ya otu ugboro na ebe nchekwa nke igbu egbugbu na ebe nchekwa gị. E nwere ọtụtụ akụkọ na-enye nsogbu maka ụdị ọrịa a pụrụ iche. Taa, ọ bụghịzi ndị Mandala na-eji egbu egbu a. I nwekwara ike iji ya.
Okpukpe Hindu - dị ka Hindu si kwuo, #mandala nwere ike ịpụta ntụgharị uche. Nke a bụ n'ihi na eji ya dị ka ihe na-elekwasị anya ma ghọọ ngwá ọrụ gbasara ime mmụọ.
Mandala #tattoo aghọwo ihe ọtụtụ mmadụ na-eji na-anọchite anya ọtụtụ ihe na ndụ, dị ka ahụ dị n'eluigwe. A pụrụ iji egbu egbu mee ọtụtụ okwu na ị nwere ike ịmata ma ọ bụrụ na ị hụrụ ezigbo egbu egbu na-achọ ihe.
Kedu ihe inwe egbu egbu dị ka nke a? Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị ahụwo ọtụtụ narị mmadụ na-eji egbu a eme ka ahụ ha dị mma. Eveyone nwere echiche nke onwe ha banyere ịhụ egbu egbu. Ndị mmadụ ole na ole dị ka ya mgbe ụfọdụ na-adịghị, ọ bụkwa ihe ziri ezi na ihe kpatara na ọ bụghị ụfọdụ tii. via
2. Ụdị Mandala aka
N'ime iri afọ ole na ole gara aga, a kwadoro ụdị ọrụ ahụ na ọha na eze, a na-elekwa ndị mere ya anya dị ka nnupụisi. via
Mee na dika o nwere ike, n'oge a, ndi mmadu n'ozuzu emeela ka ndi mmadu nwekwuo aka n'ile ya anya, o bu ezie na otutu ndi mmadu ndi na-achoghi inabata n'ime oge nile. via
4. Ụdị Mmasị Mandala
Ihe ihe ka n'ọnụ ọgụgụ na-amaghị banyere ụzọ "egbu" bụ mmeghe nke okwu Tahitian "tatu" nke bu n'obi itinye stampụ ihe. Ịtụgharị uche ebee ka ihe niile malitere? via
5. Ụkwụ Tatala Mkpa
A tụlere ihe niile, ọ bụ "Iceman" a ma ama na-achọpụta na ị hụrụ 1991? Ọ bụ onye isi na-etinye ahụ ya na 58 ebe ka mma. Nchọpụta ole na ole gụnyere gụnyere mkpakọrịta nwoke na nwanyị na-adabere na nwata egosiwo na ọ bụ 5300 afọ via
6. Azụ Tatala Tatala
N'ihe ndị a, o doro anya na ọkpụkpụ aka abụghị ihe okike site na ụzọ ọ bụla; ọ dị ọtụtụ afọ tupu mgbe ahụ. via
7. Ụdị Mandala Uche
Mba ndị a na-emeghị ka ha na-alaghachi ọtụtụ afọ iji rụọ ọrụ iji zere ọrịa. Na ndị Ijipt na-eji nịnye anụ ahụ na-eme ihe dị na mbụ, mgbe nke ahụ gasịrị, ọ gbasaa gafee Gris, Arabia na njedebe Eshia. via
8. Ladies Mandala Back egbu
N'agbanyeghi eziokwu bu na ejiri ya mee ihe iji mara ndi hoodlums, o gbanwere dika oru na Japan ruo n'ókè nke bu na Yakuza mafia jiri ya mee ka ndi mmadu tu egwu. via
9. Ugboro abụọ Mandala
Ụzọ laghachi ọtụtụ narị afọ gara aga; ọ bụ ọkọlọtọ maka ọtụtụ ezinụlọ buru ibu ka ha nwee ike ịbanye n'osisi ha ma ọ bụrụ na Norman nabatara, nke a na-apụ n'anya na nnukwu. via
10. Ụdị Tatala Mandala
Kemgbe ọtụtụ iri afọ, ngwaọrụ na ihe ndị a na-enweta n'ime ya gbanwere n'ụzọ kwesịrị ekwesị site n'akụkụ ndị dị nkọ nke nsogbu nke na-anọgide na-arụpụta ọrụ ndị ejizi dịka akụkụ nke 1891. via
11. Ụdị Mmasị Mandala
12. Ihe mere ị kwesịrị iji gaa maka tatala tatala
13. Ụdị Mandala dị egwu
14. Ụkwụ Tatala Mkpa
Enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ime ka Mandala dị ka. Ọ bụrụ na ị na-enwe mgbagwoju anya banyere ụdị igbu egbu #design na ị ga-ink na Mandala gị, gaa na intaneti ma lee ọtụtụ narị atụmatụ nke ga-adabara na ị zuru oke. isi iyi
15. Azụ Tatala Tatala
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọrọ iche dịka nke a, ihe niile ị ga-achọ bụ iji dochie egbugbu gị na atụmatụ ma ọ bụ okwu ederede ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche. Ihe nzuzo nke ịchọ mma na nke pụrụ iche na igbu egbu bụ ịchọpụta ihe ndị ọzọ na-emeghị atụmatụ ha. isi iyi
16. Ụdị Tatala Turu
Mandala tattoo nwere ozi pụrụ iche na ọ nwere ike ịnyefe. Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma nke onye ọ bụla nwere ike ịga. isi iyi
17. Ụdị Mandala aka
Ọ bụghị naanị na ọ bụ nnukwu ma maa mma, ọ na-enye gị ohere nke akụ na okomoko. Ị nwere ike ịme ọtụtụ nyocha ị chọrọ site na ịbịaru ihe dị iche iche dị iche iche, nhazi ma ọ bụ atụmatụ na Mandala nke nwere ọtụtụ nnwere onwe ohere. isi iyi
18. Akwụsị Mandala zuru ezu
E nwere ihe ndị ị ga-atụle tupu ị nwee ike ịga maka tatala Mandala gị. I kwesịrị iche echiche banyere ozi ị na-agbalị iji gosipụta egbugbu gị. isi iyi
19. Ụdị Tattoo Tattoo
I kwesiri iche echiche ma oburu na i na egbu egbu iji kwanyere aru gi aru. Ma eleghị anya, ị na-eche echiche ịchọta ozi ime mmụọ ma ọ bụ ụdị ozi ọzọ ịchọrọ ịgwa anyị. isi iyi
20. Ụkwụ Tatala Mkpa
Mgbe ị na-eche echiche ịnweta ụdị mara mma Mandala, ubu nwere ike ịbụ ebe zuru oke maka ya. Anyị nwere ike ịgwa gị mgbe niile na ọtụtụ ndị inyom na-eji nke a. isi iyi
21. Ụdị Tatala Mbụ Mandala
Ọ dịghị onye nwere ike ịkụ aka mmezu nke na-abịa mgbe ị nwetara Mandala tattoo dị ka nke a. Ọbụna ndị na-egbu egbu oge mbụ hụrụ ya n'anya. isi iyi
22. Ụdị Tatala Mandala
Ọbụna ụmụ nwoke enweghị ike ịpụ na tatala Mandala. Site na imewe dị ka nke a, ị nwere nnukwu egbu egbu iji nwee obi ụtọ. isi iyi
23. Ụdị Mandala egwu
24. Tatala Tatala Nwaanyị
Pịa ebe a iji nyekwuo Idema Ink Tattoo maka ụmụ agbọghọ
akpị akpịegbu egbu osisi lotusmma tattoosndị mmụọ oziegbu egbunnụnụegbu egbu okpuegbu egbu egbungwusi pusina-egbu egbuudara okooko osisiagbụrụ eboọdụm ọdụmGeometric Tattoosaka akarip tattoosakara ntụpọụkwụ akakoi ika tattoozodiac akara akaraima ima mmadi na nwunyeakwara obiegwu egwuegbu egbu maka ụmụ nwokeokpueze okpuezeenyi kacha mma enyindị na-egbuke egbukeenyí egbu egbuegbugbu egbugbuọnwa tattoosỤdị ekpomkpaechiche egbugbuEgwu ugona-adọ aka mmaegbu egbu hennamehndi imeweAnkle Tattoosegbu egbu mmiriNtuba ntughariaka mma akaarịlịka arịlịkan'olu oluegbu egbu diamondaka akaUche obiegbugbu maka ụmụ agbọghọegbu egbu ebighi ebiazụ azụụmụnne mgbu